Phumula futhi ujabulele i-Downtown Massena NY - I-Airbnb
Phumula futhi ujabulele i-Downtown Massena NY
Massena, New York, i-United States
Ifulethi lethu elithokomele elisedolobheni liyindawo ekahle kakhulu yokufika ekhaya kule ebusika ngemva kosuku olumatasa lokushushuluza eqhweni, ukudoba eqhweni kanye nokushushuluza eqhweni. Sinezitolo zokuthenga, izindawo zokudlela kanye nezinto eziningi ezilungele umndeni ezisizungezile. Futhi ungazama inhlanhla yakho e-Akwesasne Mohawkasino eqhele ngemizuzu engu-20 noma uhlole amakhono akho okukwehla nokutshuza e-Titus Mountain Family Ski Center amamayela angu-35 ukusuka lapha. Sisondelene ne-Montreal, i-Ottawa nesifunda se-Lake Placid Olympic.
Ifulethi elikhulu elinesitezi sesibili linombhede omkhulu, i-TV yesikrini esicaba, isevisi ye-inthanethi enejubane elikhulu, zonke izinto ezinkulu zasekhishini, itafula lokudlela nokuningi.
Izivakashi zisekude nepaki likamasipala, imnyuziyamu yedolobha kanye nomtapo wezincwadi womphakathi. Istudiyo sokuzivocavoca ne-Pilates siseduze njengoba kunjengesiteshi samaphoyisa nomnyango wezomlilo. Isiteshi sokushaja izimoto sidlula emgwaqweni kwenye yezindawo zokupaka zamahhala zikamasipala, futhi kukhona ithaveni, isihlanzi esomile, isaluni yokutshuza kanye nekilabhu yesevisi yama-veteran esivinjiwe esifanayo nefulethi. I-Massena Arena ibungaza izinhlelo zokuzijabulisa zomphakathi kanye nemidlalo ye-hockey, ukushwibeka eqhweni kanye neminye imisebenzi elungele umndeni.
Ukunethezeka, ubumfihlo nokuphepha kwezivakashi zethu kubaluleke kakhulu, futhi siyatholakala ngocingo kusuka ngo-7 ekuseni kuya ku-10 ntambama ukuze sihlangabezane nalezo zidingo ngaphandle uma kuphakama isimo esiphuthumayo esidinga ukunakwa ngokushesha.
Ukunethezeka, ubumfihlo nokuphepha kwezivakashi zethu kubaluleke kakhulu, futhi siyatholakala ngocingo kusuka ngo-7 ekuseni kuya ku-10 ntambama ukuze sihlangabezane nalezo zidingo…
Hlola ezinye izinketho ezise- Massena namaphethelo